Isu soo dhawaashaha Itoobiya iyo Eritariya iyo isbadelka arrimaha gobolka - Halbeeg News
Isu soo dhawaashaha Itoobiya iyo Eritariya iyo isbadelka arrimaha gobolka
Sanadka 2018 waa sanad xambaarsan isbadella siyaasadeed oo waaweyn dag dagna ah, oo ka dhacay Itoobiya, kuwaasoo furo u noqday isbadel ka dhaca gabi ahaanba gobolka Geeska Afrika, xirirkii colaadda iyo kala shakiga ku dhisnaana yeeshayna ififaalo nabadeed, heshiis iyo is-af-garad. Isbadeladaasi waxa ay soo ifbaxeen ka dib magacaabistii Abiy Axmed loo magacaabay inuu noqdo ra’iisul wasaaraha, doorashadii isbaheysiga talada dalka haya u doortay haweenay muslim ah inay noqoto gudoomiyaha baarlamanka, dhismaha xukuumad cusub oo ay aad uga dhex muuqdaan qowmiyadaha ku dulmanaa xukunka dalkaasi oo ay Oromadu ugu wayntahay iyo sidoo kale isbadel lagu sameeyay madaxda hay’adaha amaanka, ciidanka iyo siideynta kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah.
Afgambiga siyaasadeed ee ka dhacay Itoobiya kuma ekaanin oo kaliya isbadelka ku dhacay xiriirka ka dhexeeyay shacabka Itoobiya iyo dowladdiisa, ee sidoo kale waxa uu horseeday isbadel ku yimid xiriirka Itoobiya ay la leedahay dowladaha gobolka, oo uu ugu Horreeyo xiriirka Itoobiya iyo Eritariya oo warbaahinta reer galbeed qaarkood ku tilmaameen inay dalkaaasi Eritariya yahay kooriyada waqooyidii Afrika “Africa’s North Korea”. Labada dal waxa ay ahaayeen col 20kii sano ee u dambaysay , xiriirkoodana wuu go’naa illaa 1998dii. Hase yeeshee isla markiiba Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dalkiisu ka bixi doono si shuruud la’aan ah dhulka Badme oo aheyd xudunta colaadda ee labada dal, hadalkaasi oo ka dhignaa cadceed qorax kulul oo dhalaalisay barafkii hareeyay xiriirka labada dal 20kii sano ee u dambaysay , horseedayna in labada dal isweydaarsadaan booqasho heer madaxweyne ah, dibna u soo ceshadaan xiriirkii diblomaasi iyo midkii ganacsi.
Hadaba Su’aalaha la isweydiin karo ayaa waxa ay yihiin: maxaa ka dhaxeeyo taariikh ahaan Itooobiya iyo Eritariya? Colaadoodda u dhaxaysay labada dal 20kii sano ee la soo dhaafay xagay salka ku haysaa? Saameyn intee la eg ayuu loolanka labada dal ku yeeshay dowladaha gobolka iyo Soomaaliya? Heshiikan cusub ee labada dal maxuu ka badali karaa xaaladda gobolka geeska Afrika iyo Soomaaliya?
Sooyaalka Taariikheed ee labada dal
Itoobiya iyo Eritariya taariikh ahaan way isku dhawyihiin marka la eego dadka, dhaqanka iyo diinta, faafitaankii islaamka ee xoogiisu ahaa xeebaha iyo dowladihii islaamka ahaa ee ka hanaqaaday Eritariya ayuu ka bilowday raadka kala sooca labada dad, gumeysigii Talyaaniga ee Eritariya, oo dagaalo la galay Itoobiya oo raad wayn ku reebay dadka halkaasi dagaan, ayaa ahaa raadkii labaad ee horseeday in dadka Eritariya yeeshaan hayb ka duwan midda dhiggooda Itoobiya, xukunkii Hela silasi ee uu sida jajuubka ah ugu daray Itoobiya ayaa dhaliyay in ay Eritariyaanka bilaabaan halgan gobanimodoon kii ugu qalafsanaa ee ka dhaca Qaaradda Afrika, iyadoo jabhadda shacbiga ee xureynta Eritariya EPLF gacan saar la yeelatay dhigooda Tigreega Itoobiya TPLF, kuna guulaystay inay si wada jir ah u ridan taliskii Mengistu sanadkii 1991, si rasmi ahna ugu dhawaaqaan madaxbanaani sanadkii 1993.
Mudadii u dhexeysay 1991-1998 hogaamiyayaasha labada dal Meles Zinawi iyo Isaias Afwerki waxa ay ahaayeen kuwo aad iskugu dhaw, sidoo kale waxa ay ka mid ahaayeen madaxda dhalinyarada ah ee Afrika ee aadka ugu dhaw Maraykan oo markaas ku guulaystay dagaalkii qaboobaa, waxaana reer galbeedku u bixiyeen madaxdan naaneysta ah “Jiilka cusub ee hogaamiyayaasha Afrika” (New Generation of African Leaders) iyaga iyo hogaamiyayaasha ay kamid ahaayeen Museveni iyo Kagame. Saameynta Wada shaqeynta labada dal ay ku yeesheen Gobolka, oo markaas la marqaansanaa guushii ay ka gareen halgankoodii, waxaa ka mid ahaa cunaqabateyn iyo dagaal xuduudeed oo ay la galeen dowladaha kale ee gobolka oo ay ugu horreeyeen Suudaan iyo Yaman.
Dagaalkii labada dal (1998-2000)
Xulfaysigii hogaamiyayaasha labada dal Itoobiya iyo Eritariya waxa uu burburay sanadkii 1998, kadib khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay labada dal, kuna saabsanaa isticmaalka Itoobiya ee dekeda Casab iyo qiimaha sarifka lacag cusub oo ay samaysatay Eritariya, arrimahaas kiciyay khilaaf lahaanshaha goobo ku yaalla soohdinta labada dal, horseedayna dagaal ballaaran oo socday in ka badan labo sano oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 70- 80 kun, barakaciyay nus malyan qof, halkaasi oo Itoobiya ku qabsatay dhul badan oo ay leedahay Eritariya oo ay kamid tahay magaalada xuduuda ee Badme ee xudunta u ahayd dagaalka.
Labo sano oo dagaal qalafsan ah kadib ururkii Midnimada Afrika ayaa ku guulaystay in labada dal heshiis xabad joojin iyo dhexdhexaadin ku saxiixeen dalka Algeria sanadkii 2000, hase yeeshee Itoobiya ayaa diiday mar dambe go’aan ay soo saareen guddi isku dhafan oo loo xilsaaray muranka soohinta laba dal oo go’aamiyay in Itoobiya ay ka baxdo goobo ay kamid tahay Badme sandkii 2002, arrinkaasi oo wiiqay rajadii laga qabay in la xalliyo dagaalka, albaabadana u furay dagaal dadban oo ay labada dul ku galeen gobolka geeska Afrika.
Saameynta Dagaalka labada Dal Ku Reebay Gobolka
Maadaama ciidamo ka socda Qaramada Midoobay la kala dhex dhigay labada dal sanadkii 2000 sida uu dhigayay heshiiskii Algeria, joogsadayna dagaalkii tooska ahaa, taas badalkeeda waxa ay bilaabeen labada dal dagaal ay isku baacsanayaan gobolka, gaar ahaan dhulka Soomaaliya, oo noqday goobta ugu haboon ee ay ku lagdami karaan. laga soo bilaabo 1998 dii Eritariya waxa ay bilowday inay soo hubayso mucaaradka Itoobiya, gaar ahaan oromada, kooxihii ay waagaas la heshiisay ee howshaas qabtay waxaa kamid ahaa xuseen Ceydiid. Itoobiyana dhankeeda waxa ay bilowday inay isku dubbarrido jabhadihii xulafada la ahaa, waxana ciidamo u tababartay jabhadahii ka talinayay gobalada Koonfurta Soomaaliya ee xuduudda la leh Itoobiyo oo dhan, laga bilaabo Hiiraan Illaa iyo Gedo, si ay uga difaacdo xudeeda weerarka ay ka filanaysay xulafada Eritariya.
Hardanka labada dal ay ku galeen dhulka Soomaaliya waxa uu gaaray heerkii ugu sarreeyay xilligii u dhaxaysay 2006-2010, dagaaladii dhexmaray maxkamadihii islaamiga iyo dowaldii Cabdullaahi Yusuf , kadibna isbahaysiga dib u xurureynta Soomaaliya- garabkii Asmara iyo xukuumadii Shariif Sheikh Axmed waxa u qayb wayn ka ahaa loolanlanka labada dal, waxuuna dhaawac wayn u geystay (marka laga reebo Soomaalida oo iyagu noqday xaabada dagaalka) Itoobiya oo faraha kaga gubatay Soomaaliya. Dhanka kale, heshiiskii Jabuuti 2009 ee lagu soo dhisay dowladdii Shariif, ka bixitaankii Itoobiya ee Somaaliya, iyo iskaashigii dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika, arrimahaas oo dhan waxa ay guul u ahaayeen Itoobiya, oo ugu dambeyn ku guulaysatay in cunaqabateyn lagu soo rogo Eritariya, la hakiyana xubanimadeedii ururka IGAD, taasoo ka dhigtay Eritariya dowlad go’doonsan.
Heshiiska Labada Dal Maxuu ku Keeni Karaa Gobolka
Haadii uu ahaa dagaalkii 1998-2000 ee Itoobiya iyo Eritariya mid huriyay gobolka , gaar ahaan dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, su’aasha la iswydiin karo haatan ayaa waxa ay tahay: heshiiskan cusub ee labada dal ma qaboojin doonaa loolanka geeska Afrika.
Waxaa la hubaa in heshiiska labada dal uusan ku celin doonin hogaanka labada dal inay isu bahaystaan dowladaha kale ee gobolka sidii ay sameeyeen sagaashameeyadii oo kale , waxaana ugu wacan isbadelleda badan ee ka dhacay gobolka. Hadaynu ku horreyno Eritariya, oo aan la saadilin Karin talaabada hogaankeedu qaadi doono sidii looga bartay kal hore, waxa yaraan doono saameynta ay ku yeelan karto Soomaliya oo aan xuduud la laheyn, laakiin waxaa suuro gal ah in Suudaan iyo Jabuuti wajehaan faragalin ka timaado dhankeeda. Dhanka kale waxaa la hubaa in hogaanka cusub ee Itoobiya, oo aad ugu baahan nabad, iskaashi dhaqaale iyo horumar uu ku hanto kalsoonida shacabka Itoobiya, inuusan ku taageri doonin Eritariya inay mar kale khalkhal geliso xasiloonida gobolka ee lagama-maarmaanka u ah xilligan Itoobiya nafsadeeda.
Dhanka kale waxaa la hubaa in culayska madaxweyne Afwerki uu noqon doonaa mid kaga yimaado dadkiisa oo u ooman xorriyad iyo dimoqraadiyad in ka badan inta ay u baahanyihiin shacabka Itoobiya, Eritariya waa wadanka kaliya ee Afrika ee uu wali ka jiro hal Hisbi oo la aqoonsanyahay oo isagu ka taliyo wadanka, xisbigaasi oo laf ahaantiisu shirkii ugu dambeeyay ee uu qabsado ahaa 2002,Waxa meesha ka bixi doono colaad shisheeye oo dadka lagu cabsiiyo, mararsiiyana looga dhigto in lagu tunto xuquuqdooda iyo xorriyadooda, Waxa laga sugayaa madaxweyne Afeworki inuu ku daydo Abiy Axmed, oo uu qaado talaabooyin lamid ah kuwii uu qaaday oo ay ugu horreyso inuu sii daayo madaxda mucaaradka. Caleemaha qoyan iyo farxadda ay shacabka Eritariyaanku ku soo dhaweeyeen Abiy Axmed kama turjumayso jaceyl ay u qabaan Itoobiya iyo madaxdeeda, ee waxa ay soo dhaweynayaa una riyaaqsanyihiin waa talaabooyinka uu u qaaday dhanka xorriyadda iyo dimoqraadiyadda dadkiisa, madaxweyne Afeworkina waa inuu sidaas u akhriyaa fariimaha shacabkiisa.
Arrintan waxay darsi u tahay sidoo kale Soomaalida, gaar ahaan qadiyadda dib u mideynta Soomaaliya, mar hadii Itoobiya iyo Eritariya oo la ogsoonyahaay colaadii dhexmartay , iyo tirada dadka ay iska dileen ay heshiiyeen, sabab caqli gal ah ma noqon kartaa in Somaliland uga maqnaato midnimada kaliya sababo la xiriira gumaadka dowladdii dhexe ay ka gaysatay gobolkaasi bilowgii dagaaalkii sokeeye ee dalkaa ka dhacay?
Gabagabada iyo gunaanadka, Isbadello waaweyn ayaa ka dhacay Itoobiya, oo ah dowlad goboleedka geeska Afrika, 100 kii sano ee u dambaysay, kuwaasi oo abuuray firsado ay Soomaalida ka fiideysan karto, kuna xaqiijin kartay danaha qaran ee fog, waxaana ugu dambeeyay isbadelkii taariikhga ahaa ee 1991, kadib markii la riday xukunkii milatariga ahaa ee amxaarada ee Mengisto hogaaminayay, Soomaalidu se kama faa’iideysanin isbadelkaasi, waxaana u dhaxeynay mar aan inaga isku mashquulsannahay oo shaxda siyaasadeed aanan dagi Karin iyo mar ay talada iyo towfiiqda na habawday, marka haatan su’aashu waxa weeye: ma ka faa’iideysan doonnaan isbadelkan Cusub ee Gobolka mise waxaynu mari doonnaa tubtii khaldaneyd ee aan horay ugu lug go’nay?
Doon ay la socdeen tahriibayaal u badan Soomaali oo ku degtay xeebaha Yemen
7 Qof Oo Cudurka shuban biyoodka ugu geeriyootey degmada Wanlaweyn Ee Sh/hoose